U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD should resign if dare not control the hatemongers | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Thein Sein’s Government must stop Creating Violences against Muslims in Burma
အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်မှောက်တာကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နှုတ်ပိတ်မနေသင့်ပါ »
If you dare not control, please resign from your offices and give back the power to the Military who will be dealt with by International Community. Don’t just play puppet of Military. Don’t commit CRIMES on behalf of the Bama Buddhist Ultranationalist army.
ထို့ပြင် ဘားအံမြို့အနီးရှိ ကော့ကျိုက်နှင့်အခြားရွာများတွင် ‘ ဒီစာကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ” ဟူသောခေါင်းစဉ်ပေးထားသည့် ရေးသူဖော်ပြမထားသော အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး စာအုပ်များကို မကြာမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ထိုစာအုပ်တွင် အစ္စလာမ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားပြီး တမန်တော်မုဟမ္မဒ် အပေါ် စော်ကားထားသည့် အောက်တန်းကျသော အရေးအသားများ ပါဝင်နေကြောင်း ဘားအံမြိုမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဥိးမှ M-Media သို့ပြောကြားပါသည်။ ယခင်က ကော့ကျိုက်ရွာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများနှင့် အရောင်းအ၀ယ် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ပုံမှန်ရှိခဲ့သော်လည်း ကန့်သတ်မှုများနောက်ပိုင်းတွင် မိမိတို့ ရွာတွင်သာ ရောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်ကြရကြောင်း သိရှိရသည်။
Tags: Alan Dershowitz, International Community, International law, Law, Legal Information, Muslim, Thein Sein, United State
This entry was posted on January 21, 2013 at 4:13 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD should resign if dare not control the hatemongers”
January 21, 2013 at 6:37 am | Reply
Hate Speeches are like dosing PETROL in whole Myanmar. If there is any spark, real or created or setup allegations against any Muslims in Myanmar….Fire would broke out. Riots could be started. Now unscupulous monks are going around even in Ygn, Mdy etc, spitting on Muslims, demanding “Ransom-donation” at Muslim business, offices and shops. Some will demand to try or FIT all the goods, open up AND atlast just INSULT with the words, “they R not going to buy at Kalar shops” and went out. Bastards!
January 21, 2013 at 7:14 am | Reply
All Muslims should set up CCTV or Web cameras or record them and publish on YouTube so that the world would know about those BASTARDS insulting the Muslims to start Religious and Communal Riots. Some of them would be useful at ICC on them or IRRESPONSIBLE authorities and even on Daw Suu who keep her damn mouth SHUT.
January 21, 2013 at 8:24 am | Reply
Ko Rohingya နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၈) အပိုဒ် ၃၄၉ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ)နှင့် (ဃ) တို့တွင် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ၊ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်မှု များနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာ၊ လူမျိုးမခွဲခြားပဲ နိုင်ငံသားတိုင်း တူညီသော အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည် ဟု တွင် ပြဌာန်းထားသော်လည်း သင်္ဃန်းဝတ် သူတစ်စုမှ ကရင်လူမျိုး Muslim ဘာသာဝင် များ၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ချိုးဖောက် လျက်ရှိသည်။
ကျနော့အမြင်မှာတော့ ဒါတွေဟာ ဓာတုသိန်းစိန်အစိုးရက မွတ်စလင်မ်တွေကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်လာအောင် ဖိအားပေးနေတယ်လို့ပဲ ထင်တယ်။ ဥပဒေနဲ့ ပြောနေလို့ကလဲ အရာထင်မယ် မထင်တော့ဘူး။ စကားနဲ့ ပြောတာကို ပန်းနဲ့ ပေါက်တာလို့ပဲ သဘောထားနေတယ်။ သောက်- ကုလားတွေ၊ သောက်-ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတယ်။ ဒါတွေဟာ မွတ်စလင်မ်တွေမှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး တပ်တွေ မရှိလို့ပဲလို့ ကျနော်ကတော့ အခုတလော စိတ်ထဲကို ဒီအကြောင်းပဲ ရောက်ရောက်နေတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစက လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတိုင်းတိုင်းလိုလို လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့တယ်။ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးအတွက်၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက်။ အဲဒီလို တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။ မုဂျာဟဒ်လို့ သူတို့က ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်။ မုဂျာဟိဒ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအကျိုးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်းထမ်းရွက်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးသမား အာဇာနည်တွေကို ခေါ်တာပဲ။ အဲဒီတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာတော်လှန်ရေး သမားတွေကို ပြည်သူနဲ့ သွေးခွဲပြီး ချေမှုန်းဖြိုခွဲခဲ့တယ်။ ပြီးတော့မှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းရင်းသားပါဆိုပြီး အသိအမှတ် ပြုခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ သမိုင်းက ပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာတွေပဲ။
ကျနော်ထင်နေတာတော့ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာ အခု လက်ရှိ စစ်ခွေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အလိုတော်ရိတွေက ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း မဖြစ်၊ ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတယ်။ ဒါကို အစိုးရက သိသိကြီးနဲ့ ‘ဟ’ပေးထားတယ်။ အတိုက်အခံတွေကလည်း မသိကျိုးကျွံ့ပြုနေတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့် များမကြားမီမှာ အချိန်မှာ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဖန်တီးချင်တဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ အရိပ်အချည်တွေ တွေ့နေရတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။ အဲဒီအချက်ကို အဓိကထားပြီးတော့ ပညာရှင်တွေက တင်ပြသင့်တယ်လို့ ကျနော် မြင်တယ်။
အတည်မပြုနိုင်တဲ့ တစ်ချို့လူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်စလင်မ် ဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၂ သန်းရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီမွတ်စလင်မ် လူထုကြီးရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်မ်တွေဆီမှာ တော်လှန်ရေးတပ်မတော် ရှိမှ ဖြစ်တော့မဲ့အနေအထားကို ရောက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက အရမ်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေးလေးနက်နက်နဲ့ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး သုံးသပ်ကြရမဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာ အနောက်တိုင်းနဲ့ ဥရောပက မွတ်စလင်မ် တော်လှန်ရေးတပ်တွေကို အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ အဖြစ် ဖန်တီးလာနိုင်တယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ဒီကိစ္စတွေကို အနည်းဆုံး ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်သင့်တယ်။ ဒီလို ကန့်ကွက်လိုက်ရင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိအားပေးလိုက်သလို ဖြစ်မယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ ဒင်းတို့တွေ သွေးထိုးစမ်းနေတာကို ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ကို မီးကူးတော့မှ ပြန်ပြီးတော့ မီးသတ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီး ဆက်အိပ်နေတဲ့သူတွေလို ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးက အဓိက ဒီကိစ္စတွေကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အနောက်မှာ မွတ်စလင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံးရှိတယ်ဆိုတာကို ကုရ်ဘာနီ ဆုံးဖြတ်ချက်တုန်းက သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီ။
January 21, 2013 at 8:33 am | Reply
Justic Myanmar said>> ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ အလုပ်မအားပါ၊ သူတို့သာ အမှန်းတရားဘက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဘာမှမကြောက် (ထောင်၊အချုပ်) ဘဲ ရပ်တည်မယ်ဆို ရင် အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်တွေဒီလောက် အစော်ကားခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့မရှိရင် အဲ့ဒီ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလိုထင်နေကြတယ်။ ခေါင်းဆောင် နေရာယူ ထားပြီးခေါင်းရှောင်ကြတာ တာဝန်ဝတ္တရားပါတ်သက်ပြီးဟို(ဟာရှရ်) မှာ မေးမြန်းခံရပါမည်။
Ko Rohingya replied>>သူတို့တစ်တွေ မွတ်စလင်မ်တွေဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် မည်သည့် ထောင်တို့၊ အချုပ်တို့မှ ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာကို တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်နေတာကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ ပြန်ပြီးတော့ တရားမျှတမှုရှိအောင် ဖော်ဆောင်ပေးတာ၊ တနည်းအားဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းတာကို မည်သည့် ဥပဒေနဲ့မျှ အရေးယူလို့ မရပါ။ အကယ်၍ မတရားဖမ်းဆီးမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတွေရဲ့ သံရုံးတွေထဲကို ၀င်ပြီး နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ခိုလှုံလာတဲ့သူကို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ သံရုံးတိုင်းက အကာအကွယ်ပေးရမှာပါပဲ။ ဒါကို သူတို့ မသိလို့ ဖြစ်မှာပါ။ မည်သည့် အဖန်ဆင်းခံကိုမျှ ကြောက်စရာ မလိုပါ။ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင် ဒီလောကမှာတင် ကူညီစောင်မခြင်းကို ခံရမှာပါပဲ။